Na -arụ ọrụ na mpụga: Kedu mba nke nwere oke eriri ngwa ngwa? | Njem Absolut
Na-arụ ọrụ ná mba ọzọ: Olee mba ndị kasị elu eriri na-agba?
Monica sanchez | | ndị ọzọ
Anyị anaghịzi atụgharị uche nke anyị ndụ enweghị ịntanetị, ọ bụghị n'ụlọ ma ọ bụ na mobile anyị. Ịzụta na ecommerce, teleworking, nchọgharị na netwọk mmekọrịta, ikiri egwuregwu ndụ ma ọ bụ usoro mgbasa ozi bụ ụfọdụ n'ime ihe omume anyị na-eme kwa ụbọchị ugbu a na ruo n'oge na-adịbeghị anya gara aga yiri ka ọ dị anya. Mana iji nwee ike ime ihe ndị a niile, ọ dị mkpa inwe ezigbo ọsọ ịntanetị. Kedu mba ndị nwere oke ọrịre fiber kacha elu n'ụwa?
Dabere na ọmụmụ nke American Ookla mere nke ọ na -atụ oke ọsọ nke njikọ ịntanetị site na nnwale SpeedTest, na 2021. mba nwere ịntanetị kachasị ngwa ngwa bụ Monaco, na nkezi ọsọ nke 260 Mbps, sochiri Asia Singapore na Hong Kong nwere 252 na 248 megabytes, n'otu n'otu.
Isi mmalite: Ookla.
Na akụkụ nke ngwa ntanetị, bụ United Arab Emirates bụ ndị ji ndepụta megabytes 193 gbagoro ndepụta a. N'ime kọntinent Europe, Norway (n'ọkwa nke anọ) bụ mba mbụ n'ime oke ala ndị a nwere oke ọsọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 167 Mbps.
Spain nọ n'ọnọdụ dị ala n'okwu abụọ a. N'ihe gbasara ọsọ ịntanetị a kapịrị ọnụ, obodo anyị nọ n'ọnọdụ nke iri na atọ na nkezi nbudata nbudata nke 194 Mbps. N'ihe gbasara ịntanetị mkpanaka, Spain nwere ọkwa 37 na naanị 59 megabyte. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ihe bụ ọsọ ịntanetị ị nwere n'ụlọ gị, anyị na -ahapụrụ gị ọtụtụ ule ọsọ ọsọ.
Ọtụtụ ndị ọrụ ịntanetị na-adị n'ụwa niile. Ọnụ ọgụgụ a arịgoro ihe ruru nde 4.665 na 2020, dị ka International Telecommunications Union si kwuo. N'iburu n'uche na ọnụ ọgụgụ ndị bi n'ụwa dị nde 7.841, ihe karịrị ọkara ndị bi n'ụwa (59,4%) na -eji ịntanetị na ndụ ha kwa ụbọchị.
O doro anya na internet bụ a ga na ndụ ndị mmadụ. Ma ọ bụrụ na ha agwaghị onye ọ bụla n'ime anyị, na ọ ghọrọ ihe dị mkpa na mkpọrọ. Ma ọ bụ ka gị na ndị enyi anyị kpọọ vidiyo ma ọ bụ naanị ka gị na ezinụlọ gị kirie ihe nkiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Na-arụ ọrụ ná mba ọzọ: Olee mba ndị kasị elu eriri na-agba?
Ihe atọ ị ga-ewere ee ma ọ bụ ee na njem
Ezumike ụgbọ mmiri: mee ka nrọ gị niile mezuo!